Ukuze ufunde indlela ukupenda amehlo, ufuna ukwazi ngokuphelele yonke abesifazane. Ngisho e ezikhathini zasendulo impela, yakwazi ukwenza izimonyo silula ngezandla zakho. Namuhla, konke kulula kakhulu. Kukhona ukukhetha omkhulu imikhiqizo ehlukahlukene yezimonyo, ngokoqobo ngazo zonke izikhathi. Kodwa indlela yokusebenzisa them cha azi konke, kodwa nokho ngosuku lesifanele ukwakheka incike izinto eziningi!
Kungaba khona ayikho impendulo eziqondile umbuzo: kanjani ukupenda amehlo? Isizathu salokhu siwukuthi yonke intombazane udinga ukukhetha izimonyo ukuthi ngeke evumelana yakhe, ngoba bonke abantu ahlukile. On othize ukwakheka uyobheka emangalisayo enhle, ngakolunye - a inhlamba futhi inkanuko. Kodwa cishe sonke siyavumelana ukuthi isihluthulelo ephelele ukwakheka ngempela ilungelo inhlanganisela yemibala, futhi ikhumbula uhlobo lomuntu.
Ngokwemvelo, okokuqala zonke zingase zingasebenzi. Phela, indlela ukupenda amehlo yowesifazane azange ngokushesha aqaphele inkosi le art kancane kancane. Into esemqoka - okuqhubekayo, lapho isandla isivele igcwele kahle ukupenda amehlo kuyoba lula kakhulu. Kufanele uqale nge ukulungiswa isikhumba. Kufanele kucace, futhi kuyinto efiselekayo moisten. Ngenxa yale njongo sisebenzisa esincane ukhilimu endaweni iso futhi ngobumnene ukushayela esikhunjeni ngeminwe. Kulokhu, enze-up ngeke ukusakaza ngokulinganayo kanye namanga, namathunzi ngeke sidilike.
Ungase badlule fihla ukukhubazeka ahlukahlukene. Kungaba tindilinga amnyama, iyiphi nezinduna, freckles. Concealer, ungakhetha yisiphi, into eyinhloko ukuthi kufanele isetshenziswa ijwabu leso uqobo. Khona-ke umbala izithunzi uzobe ngaphezulu ayegcwele, elikhanyayo futhi iyunifomu, futhi ngeke sehla.
Ngemva kwalokho ungaqala ukwenza ukwakheka ngqo yena. Izazi zezimonyo kuhluke imibono yabo ngalokho okufanele kwenziwe kwasekuqaleni - ukubeka komthunzi noma ukuthatha amehlo akhe. Abantu abaningi batusa ukuba siqale ezambiwa, kodwa kungenziwa overwritten ngesikhathi efaka isicelo of amafu abe obunganakekile. Uma udinga ukuba umthunzi emgqeni, uqala kufanele uthathe amehlo ami.
Ngokuvamile esetshenziswa ezimbili shades of izithunzi - amnyama futhi ulula. Ngoba usuku, evamile ukwakheka suit umthunzi ithulisiwe, futhi kusihlwa - licace. izithunzi Khanyisa ngesineke leso elingenhla. Futhi crease, elitholakala kwi leso elingenhla, isicelo izithunzi amnyama. Ngenxa yalesi amehlo ukubheka gengelezi. izithunzi Dark kufanele kube feather kahle, okuyilona elidingekayo ukuze sebenzisa ibhulashi elikhudlwana. Shadows kungaletha cishe ukuze amashiya. On the ngaphakathi leso kungabangela kancane of pearl shades. Bheka uzovulelwa ngaphezulu.
Isinyathelo esilandelayo - ukudweba iso. Lokhu kungenziwa ezambiwa, ipensela, nezithunzi ezimnyama. Uma unhlangothi ipensela iso, khona-ke uqale kusukela maphakathi nekhulu, futhi kancane kancane ukuthuthela onqenqemeni. Lokhu kufanele kwenziwe imivimbo ezincane ngokuqondile. Bahlanganise lo mugqa kungaba izithunzi, wabe ngeke nivame emini. Iso shadow ezambiwa kudingeka kusuka ekhoneni engaphakathi, ukunyakaza okunembile, ukugcina izandla zakho. Umugqa kumelwe kube umuntu ophelele, ngoba ngokushesha Ubamba iso. Ikuphi ukwehluleka ekudaleni lalingabulawa kalula zichithe yonke imizamo odlule. Ikhono ukusebenzisa iso oqeqeshiwe kangcono kusengaphambili, uma ungekho ngokushesha. Ukuze wenze i-kwakuyinto eyimvelo, emgqeni ukwenza okuhle.
Futhi isinyathelo sokugcina iyona staining of eyelashes. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa Mascara, nemivimbo engu kungenziwa curled ikamu ekhethekile. Ngakho uyobheka Fluffy kakhulu futhi ivolumu. Kuyinto elula ukupenda eyelashes, ubambe ibhulashi kancane kwesokudla noma kwesokunxele. Ngaphambi kokufaka isicelo ungqimba Mascara yesibili kuyadingeka ukunikeza ezomile kancane kuqala.
Sethemba lamasu angenhla ziye zasiza ukuze ufunde indlela ukupenda amehlo futhi wenze amehlo akho kazibuthe futhi othakazelisayo.
Imimoya "UMariya Mi" ( "Lanvin"). Izibuyekezo ikhasimende
Clinker esiteji: izici, izinhlobo nezilinganiso. clinker amathayili izinyathelo
Yinqwaba Intulo: ukukhanda kwesisekelo ngosizo lwabo
"Heinz" baby ukudla: ubisi ubisi-ukuxubana, amazambane abondiwe, iphalishi. Izibuyekezo